Amashidi womsebenzi athi ungubani nokuthi wenzani: uwathole ku-TrovaWeb
Amabhodi eTrovaWeb anikeza ukubonakala.
Ngokuyinhloko, izinhlobo ezimbili zabasebenzisi zihamba ku-inetha: labo abanesikhathi nalabo abangenayo. Siyazi ukuthi lokhu kuyisihlukanisi esithile esikhethekile, kepha masibe sethembekile, inethiwekhi ingasetshenziselwa umsebenzi, injabulo, ukuzilibazisa futhi nokubheka izimpahla nezinsizakalo esizidingayo empilweni yansuku zonke. Nawa amashidi wesikhathi ahlongozwayo I-TrovaWeb awawona amakhadi alula nje, kepha amakhasi angashadi avumela labo abangenaso isikhathi esiningi ukuba baqonde ku-flash ukuthi ungubani nokuthi wenzani, empeleni.
Isigqebhezana somsebenzi: yenza impilo ibe lula kumakhasimende akho ngeTrovaWeb
Umjikelezo Wekhuphoni unikezwe nguTrovaWeb.
Namuhla sikhuluma ngamakhuphoni, noma esikhundleni salokho isigqebhezana somsebenzi ukuthi ukuphatha. Kule minyaka imakethe yamakhuphoni ezephulelo, amakhuphoni noma amakhuphoni avele akhula nakanjani ubufakazi bokuthi kusatshalaliswa kwezindawo ezikhethekile ezizinikela emphakathini.
Amakhomishini wokuthengisa we-Zero: yi-TrovaWeb e-commerce Revolution
ITrovaWeb: umjikelezo ongaceli ukuhanjiswa.
I-Amazon, i-eBay futhi uhlu luyaqhubeka ... Lezi zingosi ze-e esigcawini zikuvumela ukuthi uthengise imikhiqizo yakho online, kodwa kube yini ngentengo? Kuya, ngoba abaningi basebenza kukhomishini, abanye bacela imali ekhokhwayo yokuphatha isitolo sakho esibonakalayo.
Izikhangiso ezihlala isikhathi eside (azange zishaye futhi ziqhubeke futhi)
ITrovaWeb: iPortal yezinkampani lapho izikhangiso zingaphelelwa yisikhathi.
Ngabe usuhambile ekhasini lakho le-Facebook namuhla? Uma kunjalo, uzobe usuthole izikhangiso ezimbalwa ezihlukaniswe ngamabhizinisi namabhizinisi. Kuhle, manje sikumema ukuthi uvakashele ikhasi lakho futhi uphendule lo mbuzo: zingaki izikhangiso zakho ozibonile ngaphambili ezikhona?